Fanaraha-maso henjana vaovao momba ny fahatongavan'ireo seranam-piaramanidina Prague
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Fanaraha-maso henjana vaovao momba ny fahatongavan'ireo seranam-piaramanidina Prague
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mandra-pahatongan'ny fampandrenesana misimisy kokoa, ny fiovana napetraka amin'ireo seranam-piaramanidina Prague Airport dia hisy fiatraikany amin'ny mpizahatany ary koa ny olom-pirenen'i Repoblika Tseky sy ny firenena EU + hiverina any amin'ny Repoblika Tseky.
Seranam-piaramanidina Prague hanamafisana ny fanamarinana ny mpandeha rehefa tonga.
Ny seranam-piaramanidina Prague dia hanamafy ny fifehezana ireo fepetra manan-kery ankehitriny hidirana ao amin'ny firenena.
Manomboka amin'ny 1 septambra 2021, ny fomba fahatongavana ho an'ny mpandeha rehetra manidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina Prague dia ahitsy.
Araka ny fepetra fiarovana vaovao napetraky ny Minisiteran'ny Fahasalamana any amin'ny Repoblika Tseky, ny seranam-piaramanidina Prague, ny Polisy misahana ny raharaham-bahiny amin'ny Repoblika Tseky ary ny fitantanana ny fadin-tseranana ny Repoblika Czech dia hanamafy ny fifehezana ireo fepetra manan-kery hidirana ao amin'ny firenena ankehitriny.
Miaraka dia mamaly ny fitomboan'ny fifamoivoizana miadana tsikelikely ireo antoko Seranam-piaramanidina Prague ary ny fahafaha-mitsidika ny firenena amin'ny hetsika fizahan-tany ataon'ny vahiny.
Manomboka amin'ny 1 septambra 2021, ny fomba fahatongavana ho an'ny mpandeha rehetra manidina Seranam-piaramanidina Václav Havel Prague hamboarina. Mandra-pahatongan'ny fampandrenesana misimisy kokoa, ny fiovana napetraka amin'ny seranam-piaramanidina Prague Airport dia hisy fiatraikany amin'ny mpizahatany sy ny olom-pirenen'ny Repoblika Tcheky ary ireo firenena UE + miverina amin'ny Repoblika Tseky.
Ny seranam-piaramanidina dia manentana hatrany ny mpandeha mba handinika tsara ny lalàna napetraka mialoha. Talohan'ny niaingany tany Prague dia tokony nanomana sy nanao pirinty tsara ny antontan-taratasy rehetra izy ireo, ny taratasy fahatongavana ary ny fanamafisana ny tsy fifindrana raha ilaina izany.
“Mandrindra ny maodely vaovao miaraka amin'ny solontenan'ny minisiteran'ny fahasalamana sy ny mpitandro ny filaminana hafa manatrika ny seranam-piaramanidina izahay. Mampitombo ny fahaizan'ny mpiasa koa izahay ary manamafy ny fitaovana teknika hanafainganana ny fizotry ny fisavana rehetra amin'ny fahatongavana. Ny mpandeha dia afaka manampy amin'ny fanafainganana ny fizahana ny fahatongavan'i Czech, amin'ny alàlan'ny fandinihana ireo fepetra misy ankehitriny sy fanomanana mialoha ny antontan-taratasy rehetra, ”hoy i Jiří Kraus, filoha lefitra ao amin'ny birao mpitantana ny seranam-piaramanidina Prague.